पैसाको लागि जहिले पनि नाङ्गिन तयार हुने नायिकाहरु यी हुन्, नग्न हुँदै निभाए यस्तो भूमिका ! - Taja Khabar
पैसाको लागि जहिले पनि नाङ्गिन तयार हुने नायिकाहरु यी हुन्, नग्न हुँदै निभाए यस्तो भूमिका !
बोल्ड सिन सोचेजस्तो सजिलो कार्य होइन। बलिउडमा थोरै मात्र तेस्ता सेलिब्रटी छन् जो चलचित्र निर्माणका क्रममा जस्तोसुकै सिन दिन पनि तयार हुन्छन । उनीहरु सम्पूर्ण बस्त्र खोलेर पनि कथा अनुसारको सिनका लागि तयार हुन्छन । पुराना सेलिब्रटी जस्तै जेन्टिन अनम, सिमी गिरोवल र डिम्प्ल कपाडियाले पनि यो साहसी कदम उठाए तर उनीहरुले धेरै आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्यो बेलामा तेस्ता सिनहरु दर्शकहरुले खासै रुचाउने थियनन । सेंसर बोर्ड वा मिडिया पनि उनीहरुलाई बचाऊ गर्न छोडेर बिरोध गर्दै थिय । हालको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरुले तेतिबेला पनि हिम्मत गरेर तेस्ता सिन दिएका थिय ।
बिग बोसबाट चर्चामा आउन सफल भएकी सनी लियोनलाई पोर्नस्टार भनेर पनि चिनिन्छ। उनि हरेक चलचित्रमा बोल्ड सिन दिनका लागि तयार हुन्छिन । चलचित्रमा कथाले मागेको अनुसारको जस्तो सुकै बोल्ड सिनका लागि आफू पछि नपर्ने उनि बताऊछिन्। दर्शकहरु उनका चलचित्रहरु खुबै
रुची राखेर हेर्ने गर्दछन्। कहिलेसम्म उनले यस्ता सिन दिन्छिन् भन्ने बारे कसैले बुज्न सकेको छैन । दर्शकहरुले उनलाई कहिले सम्म रुचाउछन् भन्ने कुरा भने हेर्ने बाकी छ तब सनीको सुन्दर्ताको आधारमा मात्र चलचित्र निर्माण हुनेछ ।
यी बलिउड सेलिब्रटी एक फोटोसुटका लागि आफ्नो पुरा कपडा उतारेर देखिने गर्छिन । उनि निबस्त्र भएर फोटो खिचौनाका लागि धेरै नै सोखिन छिन् । उनि आफ्नो शरीरको तल्लो भाग सानो कपडाले ढाकेर फोटो खिचाउने गर्छिन ।
सलमान रूषदीकि पूर्व पत्नी हुन् पदमा लक्ष्मी जो निब्रास्त्र भएर फोटोसुट गर्ने गर्छिन । यस्ता फोटोहरु खिचाउने र बोल्ड सिन दिने गर्दापनि उनि माथि कसैले केहि नराम्रो भन्न सकेको थियन । उनको कपाल धेरै लामो भएकै कारण उनको शरीरको तल्लो भाग ढाक्न मद्धत गर्थ्यो र अरु छोप्नु पर्ने ठाउँ उनले हातलेनै छोप्ने गर्छिन ।
हालै, पाकिस्तानी अभिनेत्री वेना मलिकले एफएचएम भनिने पत्रिकाको आवरणको लागि एक फोटो खिचेकि छिन् जसका लागि उनि नग्न भएकी थिईन । यो फोटो खिच्ने क्रममा उनि तलदेखि माथि सम्म नग्न भएपनि शरीरको तल्लो भागमा सानो कपडा बेरिएको देखिन्थो र यो बाहेक अरु सम्पूर्ण शरीरका अंगहरु देखाएर फोटोसुट गराएकी थिईन ।
नेहा धूपियाले उनको पहिलो चलचित्र जूलीमा जस्तोसुकै सिन् लाई पनि आस्विकार गरिनन्। उनले चलचित्रको कथाले मागेअनुसार जस्तो सुकै बोल्ड सिनपनि दिएकी छिन् । यो चलचित्रपनि दर्शकहरुले बडो रुचिका साथ हेरेका थिय । उनि निबस्त्र भएर फोटो खिचाउदा देखिने गरेका उनका शरीरमा हानिएको ट्याटूहरु समेत धेरै दर्शकहरुले मनपराउने गरेका छन् ।
सबै भन्दा पहिले, उनले अभिनय मा आफ्नो रमाइलो एक्टिंगबाट अभिनय सुरुवात गरेकी यी नायिक अहिले धेरै चर्चामा छिन् । चलचित्रमा उनले दिएको एक्टिंगबाट मात्रै अघि बढ्न नसक्ने अवस्ता बुजेपछि उनि नांगा फोटोहरुहरु खिचाएर चर्चामा आउने कोसिस गरिन । त्यसैगरि उनि चलचित्रमा पनि बोल्ड सिनका लागि तयार भएर चर्चामा आउना सफल भईन ।
सत्यलोकबाट आएको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको सन्देश : सेयर गरे चमत्कार, बेवास्ता गरे संकट
काँचो बन्दा वा मासु खाँदा मस्तिष्कमा गम्भिर असर
नग्न तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट गरेर चर्चामा आएकी अर्चनाबारे यस्तो अर्को नयाँ खुलासा
चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पछि साम्राज्ञीको क्रेजसंगै रेट पनि बढ्यो, कतिमा साइन…
नेपाल आइडलबाट चर्चा कमाएकी रीमा विश्वकर्मालाई दलित भन्दै कालोमोसो…
१० हजार जनासँग सेक्स गरेको बताउने यि हट सुन्दरी भन्छिन् ‘पाइलट पेशाको पैसाले पुगेन…
सिक्का गालेर गहना बनाउने बढे, यसरी हुँदैछ सिक्काको दुरुपयोग
यदि यी लक्षणहरु देखा परे भने तुरुन्त आफ्नो कोलेस्ट्रल चेक गराइ हाल्नुहोस…
यो भिडियो हेरेर तपाँइ आफ्नो हाँसो रोक्न सक्नुहुन्न । भिडियो हेरौं
अरुको भूमीमा यसरी जीवन आहुती दिइरहेका छन् : कोरियामा १ जना नेपालीको यसरी मृत्यु
७० बर्षीय हजुरआमाको ज्यान जाने गरी काठमाण्डौमा भयो डरलाग्दो दुर्घटना